सिमेन्ट, सुपारी र होटल: गैरकानूनी आर्जन नै वैदेशिक लगानीको रूपमा नेपाल भित्रिन्छ, कसरी ? | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
माघ २, २०७५ बुधबार २०:१४:५४ | उज्यालो सहकर्मी
नेपालमा उदाउँदा व्यावसायिक घरानाहरूले सिमेन्ट उद्योग, सुपारी–गुट्खा ब्यापार र सेवाक्षेत्र होटल सञ्चालन गर्न, अवैध आर्जन राख्न, लुकाउन मिल्ने मुलुकबाट कसरी ल्याइरहेका छन् लगानी?‘ट्याक्स हेवन’ को नेपाल नाता ।
नेपालमा सिमेन्ट उद्योग, सुपारी र गुट्खा व्यापार अनि सेवा क्षेत्र होटल व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आइरहेको छ । तर, त्यस्तो लगानीको स्रोत सन्देहस्पद छ ।
गैरकानुनी आर्जन लुकाउन वा राख्न सजिलो हुने ‘ट्याक्स हेवन’ भनिने देशहरूबाट समेत लगानीका रूपमा गैरकानुनी आर्जन कसरी विभिन्न मुलुकमा पुग्छ भन्ने विवरण खोज पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र‘ दी इन्टरनेशनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेष्टिगेटिभ जर्नालिष्टस्’ (आईसीआईजे) ले सन् २०१७मा खुलासा गरेको थियो ।
यी विवरणहरू प्राप्त गरेपछि हामीले पछिल्ला वर्षहरूमा यस्ता मुलुकहरूबाट नेपालमा भित्रिएको विदेशी लगानी माथि आँखा लगायौं । २०७५ जेठमा उद्योग विभागबाट नेपालमा भित्रिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको विवरणप्राप्त गरेपछि देखियो– विष्णुप्रसाद न्यौपाने अध्यक्ष रहेको सौरभ ग्रुप र यो ग्रुपको लगानी रहेका १२ कम्पनीमध्ये दुुईवटा कम्पनीमा ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुकहरू ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्, यूएई र हङकङबाट विदेशी लगानी भित्रिएको रहेछ ।
राधेराधेमा अलपत्र १७ तले भवन
न्यौपानेले ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डसबाट नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएको एउटा होटलसम्बन्धी परियोजना अलपत्र अवस्थामा छ । त्यो हो, भक्तपुरको मध्यपुरथिमी नगरपालिकामा रहेको राधेराधेमा अलपत्र परेको १७ तले भवन ।
मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका अनुसार, २०६७-६८ मा न्यौपानेको सौरभ ग्रुपले राधेराधेमा पाँच तलाको भवन बनाउन अनुमति मागेको थियो । तर, मापदण्डभन्दा बाहिर गएर १७ तलाको भवन बनायो । यसरी भवन बनाएपछि नगरपालिकाले यसको निर्माण कार्य रोकिदिएको छ । (तस्वीर)
उद्योग विभागबाट प्राप्त विवरण अनुसार, न्यौपानेले ट्याक्स हेवन मुलुक ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डसकाे‘ ग्लोबल टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेडमार्क’ कम्पनीबाट विदेशी लगानी भित्र्याई यो होटल खोल्ने योजना बनाएका हुन् । यसका लागि उनले १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी गर्ने अनुमति पाएका छन् ।
तर, होटल भने मध्यपुर थिमीस्थित राधेराधेमा बनाउन खोजिएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन–२०७३ अनुसार अनुमति लिएकै स्थानमा उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, कारणवश सार्नुपरेमा अर्को अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । न्यौपानेले सार्वजनिक रूपमै आफूले होटल खोल्न खोजेकोमा नगरपालिकाले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
रोचक तथ्य के छ भने – विदेशी लगानीको अनुमति पाउनुभन्दा दुई वर्षअघि नै अर्थात् २०६८ सालबाटै यो भवन बनाउन थालिएको थियो ।
पाँच तलाको भवनसँग जोडेर १७ तले अर्को संरचना निर्माण गर्‍यो । अनुमति लिइएको छैन, मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने, मापदण्ड पूरा गरेन । खुला ठाउँ छाड्नुपर्ने भन्दा बढी क्षेत्रफलमा भवन निर्माण गरेछ । मेयर श्रेष्ठका भनाइमा मापदण्ड पूरा गर्न लगाएर निकास दिनुपर्छ भन्नेमा नगरपालिका थियो ।
तर, २०७५ असोजमा मेयर श्रेष्ठ चीन भ्रमणमा गएका थिए । त्यही मौकामा भाइकाजी तिवारी नेतृत्वको काठमाण्डाै उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट भवन बनेको क्षेत्रमा न्यौपानेले ‘प्लानिङ’को अनुमति लिने काम गरेपछि मेयर श्रेष्ठ झन् असन्तुष्ट छन् । श्रेष्ठले भने, प्लानिङको अनुमति त खाली जग्गामा हुने हो । १७ तलाको भवन बनिसकेको स्थानमा कसरी प्लानिङको अनुमति पायो ? अहिले उक्त भवनको नक्शा पास गरिदिन मेयर श्रेष्ठलाई नेकपाका नेताहरूको समेत चर्को दबाब छ ।
मेयर श्रेष्ठ भन्छन्, जसले जति दबाब दिए पनि कानून बाहिर गएर उहाँको काम हुन्न ।
न्यौपानेले ल्याएको लगानी र खोल्न खोजेको होटलका बारेमा प्रतिक्रिया लिन हामीले उनलाई पटक पटक सम्पर्क गर्‍यौं । दोस्रो पटकदेखि टेलिफोन उठाउने व्यक्तिले आफू विष्णुप्रसाद नभएर भाइ हुँ, उहाँ मोबाइल छोडेर भैरहवा जानुभएकोछ भने । दोस्रो दिनदेखि उनको मोबाइलमा हाम्रो नम्बरनै ‘ब्लक’ गरियो । उनले मेसेजको पनि जवाफ दिएनन् ।
न्यौपानेले ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को ग्लोबल टेक्नोलोजी एण्ड ट्रेडमार्क कम्पनीबाट लगानी ल्याएको नेपालको सौरभ ग्रुप यहाँ कर छलीदेखि सुपारीको कारोबारमा समेत मुछिन पुगेकोछ । उद्योग विभागले उपलब्ध गराएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सूचीमा उल्लेख भएअनुसार, सौरभ ग्रुपले विदेशी लगानी ल्याएको एउटा कम्पनीले नेपालमा साबुन र सुपारी उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
तर अनुसन्धानबाट के देखिन्छ भने उसले ‘ट्याक्स हेवन’ मुलुक यूएईबाट समेत सोही नामको कम्पनीबाट नेपालमा विदेशी लगानी ल्याएको र त्यसको उद्देश्य पनि ‘साबुन र सुपारी उत्पादन गर्ने’ नै उल्लेखछ ।
न्यौपानेको सौरभ ग्रुपअन्तर्गतका चार कम्पनीका डाइरेक्टर सुलभ अग्रवाल साबुन र सुपारी उत्पादन गर्ने कम्पनी (नाम थाहा नभएको) का साझेदार हुन् । जसमा ३ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी आएको छ । यूएईको ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेडमार्क’ लिमिटेडबाट २०६३ सालमा वीरगञ्जमा साबुन र सुपारी उत्पादन गर्न विदेशी लगानी ल्याइएको हो ।
अग्रवाल नेपालको अर्को व्यावसायिक घराना शंकर ग्रुपका उपाध्यक्ष समेत हुन् । हामीले उनको कम्पनीमा टेलिफोन गर्‍यौं । अग्रवालले कुरा गर्न चाहेनन् । उनका सहायक रितेश प्रधानले भने, सर व्यस्त हुनुहुन्छ, कुरा गर्न मिल्दैन ।
न्यौपानेको कम्पनीमा सहित गरेर ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी ट्रेडमार्क लिमिटेड’ले नेपालमा चार पटक विदेशी लगानी गर्ने अनुमति लिएको छ ।ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्बाट पनि यही नामको कम्पनीले पान सुपारीको कारोबार गरिरहेको देखिन्छ ।
यो कम्पनीको लगानी रहेको सौरभ ग्रुप नेपालमा पान मसला सुपारी निर्यातदेखि कर छलीको विवादमा समेत मुछिएकोछ ।
२०६८ सालमा विदेशी लगानी गर्ने अनुमति पाएपछि पर्साको रामगढमा पान मसला, गुट्खा, स्विट सुपारी उत्पादन गर्न श्री मीनाक्षी प्रडक्ट नेपाल प्रालि दर्ता गरेको छ । साढे ४ करोड रुपैयाँ लगानी गरी स्थापना भएको यो कम्पनीबारे खोजी गर्दै जाँदा यो पनि विवादमा मुछिएको भेटियो ।
२०७४ साउनमा फोहोरमैला गरेको भनेर स्थानीयले चर्को विरोध गरेका थिए भने कर छली विवादमा यो कम्पनी पनि मुछिएको थियो ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार २०६९ सालमा छापा मार्दा यो कम्पनीले ५४ लाख ९६ हजार २०० रुपैयाँ कर छली गरेको फेला परेको थियो । उद्योग स्थापनाका लागि पर्साको रामगढ भन्ने ठाउँमा अनुमति लिएपनि वीरगञ्ज पावर हाउस नजिकैको बस्तीको बीचमा उद्योग सञ्चालन गरेको थियो ।
जबकि औद्योगिक व्यवसाय ऐन अनुसार अनुमति लिएकै स्थानमा उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने, कारणवश सार्नुपरेमा अर्को अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसो नगरी कानूनको उल्लंघन गरेको र दुुर्गन्ध फैलाएर सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको भनेर स्थानीयले चर्को विरोध गरेका थिए ।
प्राप्त कागजात अनुसार, सन् २०१४ अप्रिलमा नेपालको यो कम्पनी र भारतको विहार सरकारबीच पटना उच्च अदालतमा करसम्बन्धी विवादमा मुद्दा चलेको देखिन्छ । ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को ग्लोबल टेक्नोलोजी ट्रेडमार्क लिमिटेड कम्पनीले भारतमा पनि पान–सूर्तीमा साम्राज्य कायम गरेको छ ।
भारतमा यो कम्पनीको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने ३८ वटा कम्पनी रहेका भारतको कर्पोरेट मामिला मन्त्रालयबाट थाहा पाउन सकिन्छ ।
ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्को ग्लोबल टेक्नोलोजी ट्रेडमार्क लिमिटेडमा सन् २००२ देखि जितेन्द्र एस मन्दोतले म्यानेजरको रूपमा काम गरिरहेका छन् । उनै मन्दोत नेपालको मीनाक्षी कम्पनीका पनि म्यानेजर र ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्का नेपाल इन्चार्ज समेत हुन् ।
नेपाल र भारतबीच हुने सुपारीको कारोबारमा यो कम्पनीकै वर्चस्व देखिन्छ । वीरगञ्ज भन्सारबाट सबैभन्दा बढी सुपारी निर्यात गर्नेमा श्री मीनाक्षी प्रडक्ट प्रालि कम्पनी पर्छ । भारतको ग्लोबल टेक्नोलोजी र नेपालको श्री मीनाक्षीकै म्यानेजर मन्दोत यस क्षेत्रका पनि इन्चार्ज हुन् ।श्री मीनाक्षी प्रडक्ट प्रालिका डाइरेक्टर विनोद खेतान छन् ।
मन्दोतसँग प्रतिक्रिया लिन हामीले उनको कम्पनीमा सम्पर्क गर्‍यौं । तीन वर्षअघि नै उनले नेपाल छाडिसकेका रहेछन् । कम्पनी घाटामा गएपछि उहाँ नेपाल छाडेर मुम्बई गइसक्नुुभयो । मन्दोतको कम्पनीमा टेलिफोन उठाउने रिसेप्सनिष्टले भनिन्, उहाँ भारतीय नागरिक हो, घर मुम्बईमा छ ।
ट्याक्स हेवन र न्यौपानेको नाता ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एण्ड ट्रेडमार्क कम्पनी’ सँग मात्रै सीमित छैन । उद्योग विभागको वैदेशिक लगानीको सूची अनुसार, न्यौपानेको लगानीमा नवलपरासीमा सञ्चालित सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालिमा हङकङको कृष्ण होल्डिङ्स लिमिटेडको ४५ प्रतिशत शेयर छ ।बाँकी ५५ प्रतिशत लगानी न्यौपाने र उनका आफन्तको नाममा छ ।
२९ वैशाख २०६८ मा हङकङमा दर्ता भएको कृष्ण होल्डिङ्स लिमिटेडले २०६९ सालमा ६३ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्र्याएको हो ।
हङकङको कृष्ण होल्डिङ्स लिमिटेड ट्याक्स हेवन मानिने अर्को मुलुक यूएईस्थित कृष्ण इन्टरनेशनलसँग पनि सम्बन्धित छ । यो सम्बन्धको लहरो पत्ता लगाउन हामीले हङकङमा कम्पनी दर्ता गर्ने सरकारी निकाय ‘हङकङ कम्पनी रजिष्ट्रिज’ मा इमेल सम्पर्क गर्‍यौं ।
उसले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार कृष्ण होल्डिङ्स लिमिटेड यूएईको कृष्ण इन्टरनेशनल लिमिटेडको होल्डिङ कम्पनी हो । जसका लगानीकर्ता रमेशकुमार सवर्थिया र अरुणादेवी सवर्थिया हुन् ।कृष्ण इन्टरनेशनल लिमिटेडले आफ्नो वेबपेजमा उल्लेख गरे अनुसार, उसले नेपाल, ट्याक्स हेवन मुलुक मौरिसस र साइप्रससहित २२ मुलुकमा लगानी गरिरहेको छ ।
रमेशकुमार सवर्थियाले ज्ञानेश्वर, काठमाडौंमा ‘कमर्सियल कम्ल्पेक्स’ निर्माण गर्ने भनेर २०६१ सालमा हङकङबाटै २ करोड ९५ लाख ५३ हजार रुपैयाँ विदेशी लगानी ल्याउने अनुमति लिएको देखिन्छ ।
ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्डस्कै ‘ग्लोबल टेक्नोलोजी एन्ड ट्रेडमार्क लिमिटेड’ ले प्रिन्टेड र ल्यामिनेशन प्याकेजिङको काम गर्न नेपालमा विदेशी लगानीको अनुमति लिएको देखिन्छ । ‘प्रिन्टेड एन्ड ल्यामिनेशन प्याकेजिङ’ को क्षेत्रमा काम गर्ने गरी यो कम्पनीमा २४ करोड रुपैयाँ लगानी ल्याइएको देखिन्छ ।
शतप्रतिशत विदेशी लगानी रहेको यो कम्पनीमा अरू नेपाली साझेदार कोही पनि देखिंदैनन् । न्यौपानेको सौरभ ग्रुपअन्तर्गतको जगदम्बा सिन्थेटिक र क्वालिटी प्याकेजिङले पनि ‘प्रिन्टिङ एन्ड ल्यामिनेशन’ कै काम गर्ने गरेको छ । यो आधारमा न्यौपानेकै कम्पनीहरूमै यसले पनि विदेशी लगानी भित्र्याएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । जगदम्बा सिन्थेटिक पनि शंकर ग्रुपसम्बद्ध कम्पनी हो ।
कर छुट पनि उसैलाई
सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष न्यौपानेको लगानी रहेका चार वटा कम्पनीहरूले नेपालको विवादास्पद कर फछ्र्योट आयोगबाट पनि कर छुट सुविधा पाएका रहेछन् । न्यौपाने मातहतका चार कम्पनी लामो समयदेखि ८ करोड ७१ लाख ९८ हजार २४३ रुपैयाँ कर बुुझाउनुपर्ने सूचीमा थिए ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले २०७१ सालमा गठन गरेको तीन सदस्यीय कर फछ्र्योट आयोगले यो ग्रुुपलाई ८ करोड ३१ लाख ८८ हजार २४३ रुपैयाँ कर छुट दियो । बुुझाउनुपर्ने कूल रकमको ३.४५ प्रतिशत अर्थात् ४० लाख १० हजार रुपैयाँ मात्रै बुुझाउन लगाएर बा“की रकम छूट दिएको थियो ।
यसमध्ये सौरभ फोटो इन्टरनेशनलले ४ करोड ४६ लाख ६८ हजार ५३१ तिर्नुपर्नेमा १० हजार मात्रै तिरेर बाँकी रकम छुट पाएको हो । जगदम्बा वायरले पनि १ करोड ४१ लाख ४६ हजार ६४४ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेमा ९ लाख रुपैया“ मात्रै बुुझाएर बा“की १ करोड ३२ लाख ४६ हजार ६४४ रुपैयाँ छूट पायो ।
सौरभ ग्रुपकै अर्को कम्पनी लक्ष्मी स्टिल्सले पनि ७५ लाख १७ हजार ३२८ तिर्नुपर्नेमा २० लाख तिरेर ६५ लाख १७ हजार ३२८ रुपैया“ छूट पाएको थियो । त्यस्तै शुुभश्री जगदम्बा सिमेन्टले १ करोड ३७ लाख ३१ हजार २७० रुपैया“ तिर्नुपर्नेमा एक लाख रुपैया“ मात्रै तिरेर १ करोड ३६ लाख ३१ हजार २७० रुपैयाँ छूट पाएको थियो ।
यो खुलासा अनुसार रोयल बैंक र बिचौलिया ल फर्म एप्पलबाईले यो योजनाका पछाडि केही जोखिम देख्यो । “हामीलाई लगानीकर्ता कम्पनी सम्बन्धी व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण जानकारी चाहिन्छ– किनभने यो लगानीकर्ता कम्पनी स्थापना हुन बाँकी छ” एप्पलबाईले लगानीकर्ताहरूलाई लेखेको इमेलमा भनिएको छ, “यसमा नेपाली कम्पनीसँग सम्बन्धित क्षेत्राधिकारको समस्या पनि छ । साथै शेयरधनीहरूको ठेगाना समेत उच्च जोखिमको विषय भएको हुँदा हामीलाई निजहरूको सम्पत्तिको स्रोत समेतको विवरण आवश्यक छ ।”इमेलमा भनिएको छ, “चुनढुंगा÷सिमेन्ट उत्पादन गर्ने परियोजनामा नेपालमा घूसको विषय पनि उठ्नसक्ने देखिन्छ ।”
यसबारेमा बुझ्न हामीले केपी सिमेन्ट उद्योगका निर्देशक क्षितिज भुषालसँग सम्पर्क गर्‌यौं । क्षितिज र सरिना दिदीभाइ रहेछन् । पहिला लक्ष्मी सिमेन्टमा मेरो लगानी थियो, अहिले केपी सिमेन्टमा छु क्षितिजले भने, “सरिना भुषाल मेरो दिदी हो, भारतका अर्चित गुप्तासँग उहाँको विवाह भएको छ ।
अहिले भारतमा भएकोले सम्पर्क गर्न सकिंदैन ।” क्षितिजले आफूले मानव आचार्यलाई पनि चिनेको बताए ।हामीले क्षितिजसँग मानव आचार्यको सम्पर्क नम्बर माग्यौं । उनले भने, “अमेरिकामा हुनुहुन्छ ।मसँग नम्बर छैन ।”
गुप्ता र आचार्य परिवारसहित २२ लगानीकर्ता रहेको केपी सिमेन्टमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति पनि छन् ।राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का वरिष्ठ नेता केशरबहादुर विष्टका छोरा विराज विष्ट केपी सिमेन्टका शेयरधनी रहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको दर्ता किताबबाट देखिन्छ ।विराज विष्ट २०७२ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सहायक मन्त्री थिए ।विष्टले केपी सिमेन्टमा आफ्नो लगानी रहेको स्वीकारे । उनले भने, “म साधारण शेयर सदस्य हँु ।विगत ८–१० वर्षदेखि यसमा संलग्न छु ।